Shabaab: Waan Taageeraynaa Dagaalka Yemen
Al Shabaab ayaa maanta boqolaal Ciidankooda ah tababar ugu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, waxaanay sheegeen in ay taageerayaan Al Qaacidada Yemen.
Munaasabad lagu qabtay Xerada Maslax ka soo qaybgalay Musuuliyiin Al Shabaab ka tirsan kuwaas oo jeediyay qudbado kala duwan.
Afhayeenka Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo munaasabada ka hadkay ayaa waxaana uu sheegay in Ciidamadan aysan aheyn kuwo laga keenay dalka dibadiisa balse ay yihiin kuwo ka soo baxay Xeryo tababar oo ay Al Shabaab ku leeyihiin gudaha dalka isaga oo faray in ay si dhab ah u jihaadaan.
Sheekh Fu’aad Maxamed Khalaf oo ka mid ah Mas’uuliyiinta Al Shabaab oo isna halkaasi ka hadal ka jeediyay ayaa marka laga soo tago inuu ugu baaqay Ciidamadii tababarka loo soo gabagabeeyay burburinta qaramada midobay iyo Cadawga Muslimiinta wuxuu dhanka kale Fariin u diray Madaxweynaha Mareykanka.
Afhayeenkii hore Alshabaab Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa kamid ahaa Saraakiisha goobta ka hadashay wuxuuna cadeeyay Inaay diyaar uyihiin inay gacan ufidayaan walaalahooda ka dagaalamaya dalka Yemen isaga oo baaq ujeediyay dhamaan mujaahidiinta meelwalba oo ay joogaan.
Munaasabada ka dib ayaa la arkayay ciidamada oo la bisan dharka tuutaha ah islamarkaana ay gaaf wareegayaan gaadiidka dagaalka oo dhoola tusk u sameynaya wada dheer ee isku xirta Ex-control Balcad iyo Xerada maslax.